Onye ntinye akwukwo Twitter kwuru otu esi edezi tweet nwere ike ịrụ ọrụ | Gam akporosis
Ohere nke ike dezie tweets ozugbo e debere ha ọ dịla mgbe ọ bụla, ma na-aga n'ihu, otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ndị ọrụ Twitter chọrọ. Jack Dorsey, ngalaba-nchoputa na onye isi nke Twitter egosila otú atụmatụ a nwere ike isi rụọ ọrụ, ọ bụrụ na emesịa mejuputa ya n'oge ụfọdụ.
Na N'ajụjụ ọnụ na Joe Rogan Ahụmahụ Podcast, onye ngalaba-nchoputa nke Twitter kwuru na "enwere ike ịtọ oge elekere ise ruo iri atọ"dezie tweets tupu ha adị ndụ. Dorsey megidere igbu oge a ogologo oge, iji chekwaa "ezigbo oge" nke tweet.
Onye isi Twitter gosipụtakwara na netwọkụ dị na-atụle ịlele ihe mbụ tweet. Agbanyeghị, edoghị anya ma ọ bụrụ na ọrụ a ga-abụ maka ehichapụ ma ọ bụ dezie tweets n'otu ụzọ ahụ Facebook si eme ka anyị nwee ohere.
Aro ndị a ha apụtaghị na ị na-arụ ọrụ na bọtịnụ dezie, ma ha na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ maara ihe a na-achọ. Anyị nwere olile anya na ụlọ ọrụ ahụ anaghị ewere ụzọ nke igbu oge, ebe ọ bụ na otu n’ime ihe kachasị kpatara iji Twitter bụ ịnata ozi na obere oge.
Mgbe obula anyi na adighi amasi ihe anyi dere ma biputa, ma obu anyi emehie na ede ede ma obupepe, a manyere anyị ihichapụ tweet ma degharịa ya ọzọ, belụsọ na onye Twitter anyị nke atọ, nwa afọ anaghị ekwe ka anyị, nye anyị nhọrọ nhọrọ, nhọrọ nke na-enye anyị ohere idezi tweet mana n'ezie na-elekọta ihichapụ nke mbụ ma bipụta nke ọhụrụ nwere ọdịnaya anyị nwere dezie. Ọ bụrụ na taa nke a abụghị nhọrọ, enwere m obi abụọ na ọ ga-ekwe omume n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Twitter co-guzobere nkọwa otú tweet edezi nwere ike isi rụọ ọrụ
You maara ihe agbara wireless ịkwụ ụgwọ bụ?